၁၆:၃၃၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ
၃၁၁၀၂ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၇ နှစ်
Replaced content with "NON CAPISCO UN TUBO."
၁၅:၀၉၊ ၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - hy:Տիեզերք)
၁၆:၃၃၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(Replaced content with "NON CAPISCO UN TUBO.")
NON CAPISCO UN TUBO.
[[File:HubbleUltraDeepFieldwithScaleComparison.jpg|thumb|right|275px| ဤဓာတ်ပုံသည် Hubble ultra deep field ၏ ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီး ဘီလီယံပေါင်းများစွာသော ကြယ်တို့ပါဝင်သည့် အမျိုးမျိုးသော ဂယ်လက်ဆီတို့ကို ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတွင် ပြသထားသော ညဖက်ကောင်းကင်၏ အရွယ်အစားကို ဘယ်ဖက် အောက်ဆုံးထောင့်တွင် ပြသညထားသည်။ အသေးဆုံးနှင့် အနီရဲဆုံး အခု၁၀၀ ခန့်မျှ ရှိသည့် ဂယ်လက်ဆီတို့မှ အလင်းသုံး တယ်လီစကုပ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဂယ်လက်ဆီများတွင် အဝေးကွာဆုံးသော ဂယ်လက်ဆီတို့ဖြစ်ပြီး မဟာအနန္တ ပေါက်ကွဲမှုကြီး ပြီးပြီးချင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဂယ်လက်ဆီများဖြစ်သည်။]]
ယခုလက်ရှိ နက္ခတ်ဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာစူးစမ်းမှုများ အရေ စကြာဝဠာ၏ သက်တမ်းကို နှစ်ပေါင်း ၁၃.ရ၃ ( ± ၀.၁၂) ဘီလီယံနှစ်မျှ သက်တမ်းကြာရှည်ပြီဟု ညွှန်ပြနေပြီး လေ့လာစူးစမ်းနိုင်သော စကြာဝဠာ၏ အချင်းမှာ အနည်းဆုံး အလင်းနှစ်ပေါင်း ၉၃ ဘီလီယံ သို့မဟုတ် ၈.၈၀ × ၁၀<sup>၂၆</sup> မီတာမျှ ရှိသည်။ (ဂလက်ဆီ နှစ်ခုသည် နှစ်ပေါင်း ၁၃ ဘီလီယံအတွင်း အလင်းနှစ်ပေါင်း ၉၃ သန်းမျှ ဝေးကွာသွားသည် ဆိုသော အချက်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော စပယ်ရှယ် ရီလေတီဗတီ သီအိုရီတွင် ဒြပ်ထုတို့သည် နေရာ-အချိန် (space-time) နယ်ပယ် အတွင်းတွင် အလင်း၏ အလျင်ထက် ပို၍ အရှိန်မြင့်တင်ခြင်းမပြုနိုင်ဟု ဆိုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။) စကြာဝဠာ၏ အရွယ်အစားမှာ အတိအကျ ရှိသည် သို့မဟုတ် အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည် ဆိုသော အချက်ကိုမူ အတိအကျ ပြော၍ မရနိုင်ပေ။
စကြာဝဠာ၏ အင်္ဂလိပ် စကားလုံး Universe သည် ရှေးဟောင်း ပြင်သစ်စကားလုံး Univers မှ ဆင်းသက်လာပြီး ထိုစကားလုံးမှာ လက်တင်စကားလုံး universum မှ တဆင့် ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်တင်စကားလုံးကို စီဆာရိုက အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကျသော လက်တင်စာရေးဆရာများမှာလည်း ခေတ်သစ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှင့် တူညီသော အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် အသုံးအနှုန်း အဖြစ် သုံးနှုန်းကြသည်။ လက်တင်စကားလုံးကို လူခရီတီးယတ်စ် (Lucretius) က De rerum natura ( အရာဝတ္ထုတို့၏ သဘာဝ) စာအုပ်အမှတ် ၄ စာကြောင်းရေအမှတ် ၂၆၂တွင် စတင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကဗျာဆန်ဆန် စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ un, uni ဆိုသည်မှာ တစ်ခုတည်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး vorsum, versum မှာ လည်ပတ်နေသော ပြောင်းလဲနေသော အရာတစ်ခု ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ လူခရီတီးယတ်စ် သုံးနှုန်းခဲ့သော အဓိပ္ပာယ်မှာ အရာအားလုံးသည် တစ်ခုတည်းအဖြစ် လည်ပတ်ပေါင်းစည်းသွားသည် ဆိုသော အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သည်။
== နက်နဲလှစွာ စကြဝဠာ ==
စကြဝဠာ၏တည်နေပုံသည် လူ့သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်၊ ယခု
တိုင် ဖြေရှင်းမသေးသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤ
ဆောင်းပါးတွင် နက္ခတ္တဗေဒ ပါရဂူများ၏ သိပ္ပံနည်းအရ
ခေတ်မီစွာ ဆန်းစစ် ရှာမှီးထားသော စကြဝဠာ အကြောင်း
သာမက၊ မြန်မာတို့၏ အစဉ်အလာအားဖြင့် စကြဝဠာနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ယူဆယုံကြည်ချက်များကို တင်ပြထားသည်။
== စကြဝဠာ ==
နက္ခတ္တဗေဒအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အလွန် ဝေး
ကွာသည့် ကြယ်များအထိ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် စကြဝဠာ
အမျိုးမျိုး ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖော်ပြကြရာမှ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/184870" မှ ရယူရန်